China Aluminium Aluminium PANEL mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
IPhaneli yeAluminium YOKUGQIBELA (A2）
IPHEPHA LOKUXELWA KWI-ALUMINUM
Alucosun Mvanje ® yazisa iipaneli ezidityanisiweyo zesizukulwane esitsha kumbindi wealuminium entsha endaweni yesiqhelo se-polyethylene okanye isiseko esigcwele izimbiwa. Le mveliso intsha ibizwa ngokuba yi-aluminium lattice panel iphuhliswa ngu-Alucosun kwiimfuno ezingqongqo zemigaqo yokubuyisa umlilo kwiimveliso zokwakha.
Yenziwe nge-100% yesakhiwo se-aluminium, ipaneli ye-aluminium ye-Alucosun ye-lattice idityaniswe nokusebenza okungacimiyo komlilo, ukukhanya okulula kunye nokulula kokuyila izinto ezenza i-Alucosun aluminium lattice panel kwiphupha labazobi.
Iphaneli yeAluminiyam ye-lattice yenziwe ngesiseko se-aluminium esingatshiyo kunye nesandwich phakathi kwe-0.7mm kunye ne-0.5mm aluminium engqindilili (ibakala elingaphandle le-AA3003 okanye i-AA5005) yomhlaba ongasemva.
Prorerity engacimi umlilo
i-EU I-BS EN 13501-1 Ukuziphatha komlilo- A2
Ukuveliswa komsi- s1
Amathontsi avuthayo- d0
UBUTYHI BONKE 3MM, 4MM
UBUTYEBI BANGAPHAMBILI BESIKHUMBA 0.50MM, 0.60MM, 0.70MM
Ububanzi 1220MM, 1250MM, 1500MM, UMGANGATHO WENKQUBO EFANELEKILEYO
UBUDE Uluhlu lwe-1000MM-5000MM
UBunzima 3.8KG / M (0.5,0.4 / 4MM); I-4.3KG / M (0.7,0.5 / 4MM)
UHLOBO LWE-ALLOY I-AA3003, i-AA5005
● Ubunzima bokukhanya:
Ngobuchule betekhnoloji esisiseko, iphaneli yelate ye-Alucosun inobunzima obukhaphukhaphu ngokuthelekiswa nezinto eziqhelekileyo ezingacimiyo ezilula ngakumbi kunezinye izinto ezinobungqongqo obufanayo. Igcina iindleko zakho zothutho kunye neendleko zabasebenzi ngokunjalo.
● Ukusebenza komlilo:
Olu lwakhiwo luqinisekisa iphaneli yokungabinakho ukutsha kwaye lwenza luthembeke ngakumbi kwaye ludume kuzo zonke izicelo ze-façade, ngakumbi e-USA (NFPA285), e-UK (BS 476-4 standard) nase-Australia (AS1530.1 standard) apho kukho imfuneko ephezulu kunye nokubango ekugcinweni ngokukhawuleza.
● Ubume bendalo:
Ukuba lilungu lomhlaba wethu, sinoxanduva lokukhusela ilizwe lethu. Isiseko sealuminium esenziwe kwipaneli ye-Alucosun A2 yi-100% enokuphinda isetyenziswe. Kananjalo akukho kungcoliseka ngexesha lokuvelisa kunye nokusetyenziswa.
● Amandla e-Peel
Iphaneli yeAluminiyam yeplati engundoqo ayizinto ezingafakwanga ngokufanayo njengamaphepha amabini okugubungela. Amava afanayo eemathiriyeli ukwandiswa kobushushu kunye noxinzelelo lwesivumelwano. Okwangoku sinokuqina kwamandla okwequbeka veki nganye kwiintsuku ezingama-30 emva kwemveliso. Iiphaneli zethu azinasiphelo.
● Umsi onetyhefu
Ukufa komlilo okuninzi akubangelwa kukutsha, kodwa kukutshaya inhalation, Isiseko se-Alucosun A2 yi-aluminium emsulwa kwaye ayinakutsha. Ngelixa ii-cores zezinye iipaneli zesiko ezingacimi mlilo zizinto zamachiza, ke iipaneli zethu ezintsha zikhuselekile kwaye zithembekile kuba azinakukhupha xa zishushu.
Iphaneli yeAluminiyam ye-aluminium engundoqo ye-aluminium ilungele ukunqunyulwa kunye ne-grooved kwaye inganxibi kangako kwii-routers. Ke ngoko, igcina uhlahlo-lwabiwo mali kunye nexesha. Ithatha iimilo ezininzi ezahlukeneyo kwaye ukwenziwa kwayo ngokugqibeleleyo akuchaphazeli uzinzo okanye ubungqongqo bayo.
IINDAWO UMGANGATHO WOVAVANYO IMEKO okanye iYUNITHI IZIPHUMO
Ubunzima beyunithi I-ASTM D 792 Kg / m² 4.3
IAluminiyam engaphambili - mm 0.7
Ukwaleka Ubukhulu EN ISO 2360-2003 μm 32
Ipensile Ukuqina I-ASTM D3363 HB min 2H
Ukuchasana nefuthe I-ASTM D2794 kg.cm Zili-110
Ukwaleka ukuguquguquka I-ASTM D 4145 T-ukugoba (0-3T) 2T
Ukwahlula ukunamathela I-ASTM D 3359 Akukho lahleko yokubambelela Kugqityiwe
Ukugcinwa kombala I-ASTM D 224 Ubungakanani beMilinganiselo emi-5 emva kweeyure ezingama-4000 Kugqityiwe
Ukugcinwa kweGloss I-ASTM D 523 I-80% emva kweeyure ezingama-4000 Kugqityiwe
Ukumelana neChalk I-ASTM D 4214 Ubungakanani beMilinganiselo ye-8 yeeyunithi emva kweeyure ezingama-4000 Kugqityiwe
Ukumelana naManzi abilayo AAMA 2605 100 kwimizuzu engama-20 Ngaphantsi kwe-5% 4B
Ukuxhathisa i-Muriatic Acid AAMA 2605 Amaconsi e-10 ye-10% ye-HLC, i-15mins Akukho blister
Ukumelana nealkali I-ASTM 1308 I-10%, i-25% ye-NaOH, iyure e-1 Akukho tshintsho
Ukuxhathisa ngeTyuwa I-ASTM B117 Iiyure ezingama-4000 ze-Upto Akukho tshintsho
Ubushushu obusezantsi - -40 - 80 Akukho tshintsho
Amandla ePeel I-ASTM D 1781 mm · N / mm I-140mm · N / mm (ulusu lwangaphambili) 125mm · N / mm (ulusu lwangasemva)
Tensile Strength I-ASTM E8 MPHA 5mm / min, 69MPa
Isalathiso sokunciphisa isandi I-ISO 717-1: 2013 db I-22 (-1, -2)
Iwaranti esemgangathweni yiminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 ixhomekeke kwindawo ekuyo iiprojekthi ngqo. Iwaranti yeminyaka engama-30 iyafumaneka kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu ezikumgangatho ophakamileyo.
Imibala eyahlukeneyo kunye nokugqiba okukhethiweyo kwenza iAlucosun yakutshanje®ukhetho oluthandayo lokwakha imvulophu. Ukwahluka kweembonakalo, ukuhlala kweenkqubo zokupenda umgangatho wokugqiba njl. iyenza ifaneleke nakusiphi na isicelo sokubopha nokuba sisakhiwo sorhwebo, isakhiwo sodumo kunye nesazisi esikhethekileyo okanye uphawu olumiselweyo. Alucosun Mvanje®inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zomgangatho kunye nesiko ngaphandle kwendlu yokufaka iikhoyili. Alucosun Mvanje® umphezulu ugqityiwe ngenkqubo ye-PVDF kunye ne-NANO kwi Inkqubo yokufaka iikhoyili eqhubekayo eqinisekisa umgangatho kunye nokuhambelana ngokuhambelana nemigaqo ye-AAMA 2605.
UNANA-PVDFyinkqubo yokupenda yokuzicoca. Inkqubo yepeyinti enjalo ibonelela ngengubo ephezulu ecacileyo enezinto ezinqamleze kakhulu ezinamacala e-NANO kwiPVDF Gqibezela; eqinisekisa umphezulu ogudileyo. Umphezulu ogudileyo kunye nocacileyo wenza ukungcola nothuli lokuncamathela ekuncamatheni kulo okunika isakhiwo ukujonga okucocekileyo rhoqo. Inkqubo ye-PVDF kunye ne-NANO yepeyinti yomelele kakhulu iqinisekisa iminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 yokugqiba iwaranti.
UXELWE iiphaneli ngeendlela ezahlukeneyo ze-FInish ziyafumaneka kwi-Alucosun®nangona kunjalo ixhomekeke kwixesha elithile kunye nobungakanani bemida. Ngokwemvelo kukhuselwe iiphaneli zokwaleka kwe-anodized kuyomelela kakhulu ukumelana nokukrwela kunika iwaranti malunga neminyaka engama-30.
I-PE kunye ne-HDPEIipeyinti zisetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezininzi enkosi kuluhlu olubanzi lwemibala kunye noqwalaselo lwezoqoqosho, ngoku iminyaka yesiqinisekiso inokwandiswa ukusuka kwiminyaka emi-5 ukuya kwiminyaka esi-8 ngeendlela ezahlukeneyo zokwaleka. Ukugqitywa kwe-HDPE kukwafumaneka njengenkqubo yokupenda yesiko.
Xa ipaneli yealuminiyam iphantsi kolwakhiwo, iya kuthi gingci kwicandelo lokusonga kwaye inokuvula i-V-groove kunye ne-U-groove, njl.njl. Iyakusebenzisa oomatshini abakhethekileyo be-grooving kwipaneli ye-aluminium ukuqinisekisa ukuba ubunzulu be-grooving abonakalisi izinto ezichasene ne-aluminium kwaye iya kushiywa nge-0.8 mm ubukhulu. Inokwamkela amanyathelo okuqinisa njengobambo olunqamlezileyo, njlnjl. Njengoko kufuneka kwicandelo le-grooving.
Egqithileyo I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL (YOPHAWU)
Okulandelayo: I-ALUMUMUM IPHANI YOMBUSO